राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धी नहुने « Janata Samachar
राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धी नहुने
प्रकाशित मिति : 10 October, 2019 3:44 pm
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धी नहुने भएको छ ।। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको शनिबार र आइतबार हुने राजकीय भ्रमणबारे पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् विज्ञहरुसँगको छलफलपछिपरराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने प्रष्टयाउनु भएको हो ।
अन्य राष्ट्रहरुसँग पनि छलफल गरेर प्रक्रियालाई अघि बढाइने भएको छ । तर भ्रमणमा सन्धिमा सम्झौंता नहुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ ।
बालुवाटारमा बिहीबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण आफैंमा ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सबै दलको साथ हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले चिनियाँ राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछिको यो भ्रमण ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीाई सुझाव दिनु भएको थियो । सबै नेताले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई सफल बनाउन जोड दिनु भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
बैठकमा विज्ञहरुले नेपालको व्यापार घाटालाई कम हुने गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा साझेदारीको विकास गर्न चीनसँग राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीद्धय डा. रामशरण महत र डा. प्रकाशशरण महतले चीनसँग ऋण नभई अनुदान सहायता लिएर रेल सेवा विस्तारको कामलाई अघि बढाउन पहल गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिनु भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिनु भयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा रेल, सडक, विद्युतीय ट्रान्समिसन लाईन विस्तारलगायतका कनेक्टिभीटीका विषयमा पनि छलफल हुने जानकारी गराउनु भएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछिको यो भ्रमणलाई सफल बनाउने विषयमा एजेन्डा तय गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसहितको विज्ञहरुसँग सामूहिक छलफल गर्नु भएको हो ।
बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रीपरिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको उपस्थिति रहेको थियो । पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु, चीनका लागि नेपालका राजदुत लिलामणी पौडेलसहित पूर्व राजदूततको पनि बैठकमा सहभागी हुनु भएको थियो ।